Dhageyso :-Janan oo ka hadlay kulan labo Goor dhexmaray madaxweyne Farmaajo - Awdinle Online
Dhageyso :-Janan oo ka hadlay kulan labo Goor dhexmaray madaxweyne Farmaajo
February 9, 2020 (Awdinle Online) –Wasiirka amniga Jubbaland C/rashiid Janan oo hadda ku sugan duleedka degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo ayaa ka warbixiyay kulan magaalada Muqdisho ku dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiir Janan ayaa sheegay in mudadii uu ku xirnaa magaalada Muqdisho uu la jeer la kulmay madaxweyne Farmaajo oo ay ka wada hadleen labo qadiyadood oo kala ah doorasho Dowladda ogoshay oo ka dhacda Jubbaland iyo arrimo kale oo ku saabsan xaaladda gobolka Gedo.
Mr. Janan oo hadda baxsad ku ah Kenya ayaa hoosta ka xariiqay in madaxweynaha ay isku fahmi waayeen arrimihii ay ka wada hadleen,islamarkaana uu si cad ugu sheegay in Jubbaland uu ka jiro maamul la aqoonsan yahay,islamarkaana hadda u baahneyn nidaam cusub oo loo sameeyo.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa tilmaamay inuu la kulmay mas’uuliyiinta ugu sareysa Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaran oo uu dhismaheeda deganaa mdo 8-bilood ah.
Wasiirka ayaa u mahad celiyay qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya uu ka mid ah Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo si weyn kaga hadlay xariga Janan kuna dhaliilay Dowladda Federaalka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Kenya ka dalbaday iney u soo gacan geliso Wasiir Janan oo hadda baxsad ku ah dalkeeda.
Previous articleMamulka gobalka banaadir oo soo rogay amar
Next articleAbdel Fattah asisi oo maanta wareejin doona Xilka gudoomiyaha Midowga Africa.